Madaxweynaha Uruguay Tabare Vazquez ayaa si shaqsi ahaan warqad u qoray Griezmann isagoo ugu hambalyeeyay ku guuleysashadiisa Koobka Adduunka iyo inuu doonayo inuu la kulmo. – Damqo
Madaxweynaha Uruguay Tabare Vazquez ayaa si shaqsi ahaan warqad u qoray Griezmann isagoo ugu hambalyeeyay ku guuleysashadiisa Koobka Adduunka iyo inuu doonayo inuu la kulmo.
Antoine Griezmann ayaa in ka badan hal jeer waxa uu soo bandhigay jaceylka uu u qabo dalka Uruguay. Ixtiraamka uu u haya wadanka Koonfurta Ameerika ku yaala ayaa xitaa gaaray inuusan u dabaaldegin goolkii uu ka dhaliyay Uruguay semi-finalkii Koobka Adduunka, isagoo ka dib kulankaas xirtay calanka Uruguay markii uu wareysi bixinayay.
Ixtiraam la mid ah ayaana xiddiga reer France looga hayaa Uruguay, sannadkii hore magaalada Montevideo ayaa siisay abaalmarinta Visitante Illustre oo ah mid u dhiganta in furaha magaalo qof lagu wareejiyo.
Griezmann ayaa si weyn looga ixtiraamayaa Uruguay iyadoo dadka reer Uruguay ay caruurtooda u bixinayaan magaca Antoine oo kala duwan sida Antuan, Antuán ama Anthuán. Ciyaartoyda kale ee caanka ah ee magacooda loo bixiyo caruurta dhalaneysa waxaa ka mid ah Neymar, David Beckham iyo Edinson Cavani sida ay sheegtay jariirada Uruguay ee El Pais.
“Tan iyo markii aan 18 jir ahaa oo aan bilaabay inaan ku xamaasho kubada cagta.. sannad walba waxaa ila joogay qof Uruguay ah oo i caawinayay waqtiyada adag, mar walba waxaa i caawin jirtay qof Uruguay ah oo dhoolacadeynaya.” ayuu Griezmann sharaxaad ku bixiyay isbuucyo ka hor mar uu joogay garoonka diyaaradaha Montevideo.
Xiddiga reer France ayaa waayihiisa ciyaareed ka bilaabay Real Sociedad oo uu macalin u ahaa ninka reer Uruguay Martin Lasarte. Waxaa halkaas sidoo kale ku caawiyay weeraryahanka reer Uruguay Carlos Bueno.
Tan iyo markii uu ku biiray Atletico Madrid sannadii 2014 waxa ay saaxiibo isku weyn noqdo xiddigaha reer Uruguay ee kooxda gaar ahaan kabtan Diego Godin. Godin waxa uu gardaadiyay gabdhaha Griezmann kaasoo dhawaan ka qeyb galay arooska kabtanka Atletic oo ka dhacay Uruguay.
Previous Roob xoog badan oo xalay iyo saakay ka da’aayay oo wadooyinkii Xamar biyo dhigay
Next Kim Jong-un oo Trump ku tilmaamay in yahay nin ay maskaxdiisa wax u dhimanyahiin.